ब्राह्मणले छोएको कहिल्यै खान नपरोस ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
म दलितले छोएको खान्छु । भोटे, सार्की, कामी, दमाई, पोडे, मगर सबैले छोएको खान्छु । तर याद होस, जो धर्मको नाममा पुरातनवादी सोचले लिप्त भएर आफुलाई कट्टर बाहुन दाबी गर्छन, त्यस्ता ब्यतिहरुले दिएको केही खान्न । मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, धनि र गरिब सबै मेरो लागि एकै हो । खासगरी मानिसको पुरातनवादी विचारधारा भएको कारणले यस्ता जातिय भेदभावका घटनाहरु अझैपनि जरा गाडेर बसेका छन् । तर कुनै ठाउँमा यस्तो अवस्था पनि हुन्छ, जहाँ मनिसहरुले धन दौलत भएका महिलाहरुलाई दलितको आरोप मारेर धन लुट्न खोज्छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार नगर्दा जीवनमाथि पैदा हुन सक्ने सङ्कट आएको छ ।
भोटे, सार्की, कामी, दमाई, पोडे, मगर सबैले छोएको खान्छु । तर याद होस, जो धर्मको नाममा पुरातनवादी सोचले लिप्त भएर आफुलाई कट्टर बाहुन दाबी गर्छन, त्यस्ता ब्यतिहरुले दिएको केही खान्न ।
शक्तिका आडमा मानवाधिकार उलङ्घनका घटना दबाइने गरेको छ । अझैपनि दलित समुदायभित्रका सबै जात–जाति र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नहुनु अत्यन्तै दुख लाग्दो कुरा हो । असमानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, समतामूलक तथा शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो । छुवाछुत र भेदभावको प्रथा पहिलेदेखि चलि आएको कुप्रथा हो । आजको आधुनिक युगमा विज्ञान र प्रविधिले धेरै कुरा बुझाई सकेको भएपनि यस कुप्रथामा विश्वास गर्नेहरु अझैसम्म धेरै छन् ।
त्यसैले अहिलेसम्म पनि दलितहरुले दुख भोग्नु परेको छ । होइन, यो धर्मको नाम कहिलेसम्म पीडित हुने ? नेपालीहरु दलितहरु एकढिक्का नभएकै कारण समाजमा अझै पनि दलितहरुमाथि अनेकन हतकण्डा अपनाउन थालेका छन् । दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कार्वाही होस र यस्ता अपराधिक कृयाकलापका बिरुद्ध समाजका सचेत ब्यक्तिहरु जुट्न जरुरी छ ।
दलित भन्दै भाडावालालाई अपमानजनक ढंगले डेराबाट निकाल्ने घरधनीहरु यही समाजमै छन् । दलित भएको आरोपमा घरबाट निकाल्ने, महिलाहरुलाई दाईजोको नाममा हिंसा गर्ने र दिनभर जाँड धोकेर बेलुकी श्रीमति कुट्ने ब्राह्मणहरुले छाएको कहिल्यै पनि खान नपरोस ।
उच्च कुल घरानामा मानिसलाई तल्लो जात भन्दै हेलाँ गर्छन । तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने कोहि छैन । हामी सबैको नकारात्मक सोच अनि रुढीबादी परम्परा हो । धामी झाँक्री र भूतप्रेत अन्धविश्वासका पात्र हुन् । दलित भन्दै भाडावालालाई अपमानजनक ढंगले डेराबाट निकाल्ने घरधनीहरु यही समाजमै छन् । दलित भएको आरोपमा घरबाट निकाल्ने, महिलाहरुलाई दाईजोको नाममा हिंसा गर्ने र दिनभर जाँड धोकेर बेलुकी श्रीमति कुट्ने ब्राह्मणहरुले छाएको कहिल्यै पनि खान नपरोस । दलित भएकै कारण बेइज्यतीपूर्ण ढंगले घरबाट निकालेका यो समाजका किराहरु अझै छन् । सदियौँ देखि उत्पीडनमा रहेका दलित समुदायलाई वास्तविक रुपमै कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर अब गहिरो र विस्तृत छलफल चलाउन जरुरी छ ।